Hutano, 31 Zvita 2018 page 1
Nhengo dzeARTUZ Dzinosungwa Zvekare Dzasvika kuMabvuku
Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe gumi neina dzasungwa zvekare nemapurisa paMabvuku turn-off padyo neHarare.
Komisheni yaVaMotlanthe Inoti Hurumende Ngairipe Vakafa neVakakuvadzwa Muna Nyamavhuvhu
Komisheni yakakagadzwa kuti iongorore zvakaitika pamhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa uye vakawanda vakuvara, inoti hurumende inofanirwa kuripa vose vakafa pamwe nekukuvara mumhirizhonga iyi.
VanaChiremba Vagara paMabasa muZvipatara zveHurumende Vanoramwawo Mabasa
Vanachiremba vakuru ava vanoti vatora danho iri nekuda kwekuremerwa nebasa vari voga.
Nhengo Pfumbamwe dzeARTUZ Dzinosungwa kuMacheke
Mapurisa ekuMacheke asunga nhengo pfumbamwe dzesangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, apo dzange dzichifora dzakananga kuHarare.
Vana chiremba vari kuramwa mabasa varatidzira pachipatara cheParirenyatwa muHarare vachiti kunyange hurumende ikaramba ichivatsityidzira, havasi kuzodzekera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.